IT Portal - : IT Portal IT Portal -
एसईई को रिजल्ट शुक्रबार बिहान हुँदै, यसरी हेनुहोस् नतिजा
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ले एसईईको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रयोगकर्ताले विभिन्न कोडमा एसएमएस गरी परीक्षाको नतिजा थाहा पाउन सक्छन् साथै एक दर्जन वेबसाइटमा पनि नतिजा प्रकाशित हुनेछ । एसईईको नतिजा थाहा पाउन निम्न कोडमा एसएमएस गर्नुहोस् वा वेबसाइटमा हेर्नुहोस् ।
४० सहरमा फोरजी सेवाको परीक्षण गर्दै एनसेल
निजी तर्फको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले देशका ४० शहरमा फोरजी इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्न परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ । हाल देशका ६० भन्दा बढी जिल्लामा एनसेलको थ्रीजी सेवा सञ्चालनमा छन् । एनसेलले जेठ १८ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित बनेपा, धुलिखेल र नगरकोट क्षेत्रमा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । फोरजी
टेलिकमको नम्बरमा विदेशबाट फोन आए बोनस पाइने !
नेपाल टेलिकमको कुनैपनि मोबाइल नम्बरमा विदेशबाट फोन आउँदा ग्राहकहरुले बोनस पाउने भएका छन्। टेलिकमकाअनुसार हाल परीक्षणको क्रममा रहेको उक्त स्किममा हरेक अंग्रेजी महिनाको १ देखि १५ गतेभित्र ५० मिनेट वा सोभन्दा बढी कल विदेशबाट आएमा ग्राहकले ५० मिनेट निशुल्क टकटाइम पाउने भएका छन्। सात दिनभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने त्यस्तो बोनससँगै ग्राहकहरुले
स्मार्टफोनको बारेमा यी भ्रम हटाउनुहोस्
अहिलेको सोसल मिडियाको जमानामा बजारमा अनेक थरी समाचारहरु भाइरल भइरहेका हुन्छन् । त्यसरी भाइरल हुने सन्दर्भहरुमध्ये कतिपय झुटा तथा नक्कली समेत रहेका हुन्छन् । आधुनिक जिवनशैलीको अभिन्न पाटो बनिरहेको स्मार्टफोनका बारेमा पनि आम मानिसमा केही भ्रमहरु रहेका छन्, जसको यथार्थसँग कुनै नाता छैन । स्मार्टफोनसँग जोडिएका ७ भ्रम र त्यसको
GadgetSmartphoneSmartPhone in Nepal
तपाईंको फेसबुक अरुले त चलाइरहेका छैनन् ?, यसरी थाहा पाउँनुहोस्
हामी आफ्नो स्मार्टफोनमा बाहेक पनि घर र कार्यालयका विभिन्न कम्युटरमा फेसबुक चलाइरहेका हुन्छौं । आफ्नो फेसबुक ह्याक गरेर चलाउन गाह्रो कुरा भएपनि हामी आफैंले चलाएको...
फिल्म हेर्ने ५ सजिलो तरिका
सबै फिल्म यूट्युवमा राखिएका हुन्नन् र सबै फिल्म टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्न सम्भव पनि हुन्न । बरु, योभन्दा इन्टरनेटबाट फिल्म हेर्न पाए ? अनलाइनमा फिल्म हेर्न...
इन्टरनेट स्लो छ ? म्यासेन्जर लाइट प्रयोग गर्नुहोस्
वाइफाइ चलाए पनि स्लो छ भने म्यासेन्जरमा भएको फोटो, भिडियो र च्याट थ्रेड लोड हुन कम्ति समय लाग्दैन । त्यसमाथि डाटाबाट चलाउनुभएको छ भने त...
यी हुन् मोबाइलको मेमोरी खाली गर्ने सरल तरिका
हरेक स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई आफ्नो स्मार्टफोनमा लो मेमोरीको समस्याले सताउँदछ । खासगरी जुन स्मार्टफोनमा माइक्रो एसडी कार्ड हुँदैन त्यस्ता स्मार्टफोनमा इन्टर्नल मेमोरी छिटै भरिन्छ । स्पेस...
भाग्य बताउँने नेपाली एप
अहिलेलाई विज्ञान प्रविधिको युग भनिन्छ । तर, विज्ञानले जतिसुकै रहस्यहरु उतांगो पारे पनि मानिसको जन्म, कर्म र मृत्युसँग तारा नक्षत्रको सम्बन्धबारे ज्यातिष विज्ञानले गर्ने दाबीलाई...
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ले एसईईको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रयोगकर्ताले विभिन्न कोडमा एसएमएस गरी परीक्षाको नतिजा...
निजी तर्फको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले देशका ४० शहरमा फोरजी इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्न परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ । हाल देशका ६० भन्दा बढी...
नेपाल टेलिकमको कुनैपनि मोबाइल नम्बरमा विदेशबाट फोन आउँदा ग्राहकहरुले बोनस पाउने भएका छन्। टेलिकमकाअनुसार हाल परीक्षणको क्रममा रहेको उक्त स्किममा हरेक अंग्रेजी महिनाको १ देखि...
अहिलेको सोसल मिडियाको जमानामा बजारमा अनेक थरी समाचारहरु भाइरल भइरहेका हुन्छन् । त्यसरी भाइरल हुने सन्दर्भहरुमध्ये कतिपय झुटा तथा नक्कली समेत रहेका हुन्छन् । आधुनिक...
© 2016 | All right reserved by